မန်းလေးဂေဇက်အလှူတော် နတ်လူသာဓုခေါ်စေသော်ဝ်….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » မန်းလေးဂေဇက်အလှူတော် နတ်လူသာဓုခေါ်စေသော်ဝ်…..
Posted by kotun winlatt on Jul 31, 2012 in Local Guides, Photography, Travel | 26 comments
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ အင်းတော်မြို့နယ်၊ မော်လူးဒေသ၊ နမီးအုပ်စု၊
ခေါင်တုန့်စည်ကျေးရွာတွင် ဆောက်လုပ်ဆဲ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး အခြေခံပညာ
မူလတန်းကျောင်း အတွက် အလှူပစ္စည်းများ ပေးအပ်ပွဲကို (၃၀.၇.၂၀၁၂)နေ့တွင်
မော်လူးဒေသ ကူးဆိပ်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဝင်း အတွင်းကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ဆောက်လုပ်ဆဲ စာသင်ဆောင်လေးအတွက် မန္တလေးဂေဇက်(mandalay gazette) အွန်လိုင်းသုံးစွဲသူ အဖွဲဝင်များမှ
လှူဒါန်းသော သွပ်(၂၆၅) ချပ် ၊ ပြောင်သွပ်(၁၀)ချပ်၊ သွပ်မှို+၀ါရှာ(၁၁)ပိဿာ(ကာလတန်ဘိုး-၉၈၁၀၀၀ကျပ်)
တန်ဘိုးရှိသော ပစ္စည်းများနှင့် မော်လူးမှ one candle စေတနာရှင်လူငယ်များအဖွဲ့မှ ၀ါဆိုသင်္ကန်းတစ်စုံ၊သင်ပုန်း(၄)ချပ်၊
သောက်ရေပုံး(၅)ပုံး၊သောက်ရေခွက်(၁၀)ခွက်၊ ရေစစ်၊ တံမြက်စည်း၊ အိမ်သာခွက် (၃)ခု၊
အိမ်သာဆေးဘရပ်စ်(ကာလတန်ဘိုး၅၆၀၀၀ ကျပ်) အစရှိသော ပစ္စည်းများကို
ကျောင်းဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီ နာယက ကူးဆိပ်ကျောင်းဆရာတော်
ဦးကာလိန္ဒမှတဆင့် ခေါင်တုန့်စည်ရွာ ရပ်မိရပ်ဖများသို့ လွှဲပြောင်း
ဆရာတော်ထံမှ ငါးပါးသီလခံယူဆောက်တည်ပြီး one candle စေတနာရှင်လူငယ်များ
အဖွဲ့မှ ကိုထွန်းဝင်းလတ်က အလှူဖြစ်ပေါ်လာပုံအကြောင်းကို
ရေစက်ချ အမျှဝေကာ သာဓုခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါသည်။
အလှူပစ္စည်းလွဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲသို့ လာရောက်ကြသူများအား ဆရာတော်
ဆောက်လုပ်ဆဲ ခေါင်တုန့်စည်ရွာ စာသင်ဆောင်လေး အတွက် နောက်ထပ်လိုအပ်သော
ပစ္စည်းလေးများကိုလည်း မန္တလေးဂေဇက်မှာ ထပ်မံလှူဒါန်းဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း
လေးပေါက်နဲ့ ကိုထူးဆန်းရေ..အလုပ်ရှုပ်နေမှာစိုးလို့ မေလ်းမပို့တော့ပဲ… ကျနော်ပုံတွေကို တင်လိုက်ပီနော်..
စာကို ဒီထက်ပိုများများရေးချင်ပေမယ့်… စိတ်မချရတဲ့ ကွန်နက်ရှင်ကြောင့် ဒီလောက်ပဲ ရေးလိုက်ပါတယ်..
နောက်ထပ်ပစ္စည်းတွေရောက်လာရင် လွဲအပ်ပွဲပုံလေးတွေကို ထပ်တင်ပေးပါ့မယ်….
အလှူပစ္စည်းတွေအတွက် ခေါင်တုန့်စည်ရွာသားတွေက မျက်ရည်တွေပါ ကျကုန်တယ်ခင်ဗျ..သူတို့လို တောကျလွန်းတဲ့ ရွာလေးကို ဘယ်သူကမှ ဒီလောက်များများ မလှူကြဘူးလို့တဲ့ခင်ဗျ..
အလှူဖြစ်မြောက်ဖို့ရာ ကြိုးပမ်းပေးခဲ့တဲ့ ကိုထူးဆန်း၊ အလှူပစ္စည်းဝယ်ယူပေးပို့ပေးတဲ့ လေးပေါက်နဲ့ ကိုပေ၊ အလှူငွေထည့်ဝင်ပေးကြပြီး ခေါင်တုန့်စည်ကျောင်းလေးအတွက် လှူဒါန်းကြဖို့ရာ သဘောတူညီပေးကြသော ဂေဇက်အဖွဲ့ဝင်များ အားလုံးကို ခေါင်တုန့်စည်ရွာသားများကိုယ်စား ကျနော်မှ ကျေးဇူးအထူး(အထူး)ပင် တင်ရှိပါကြောင်းခင်ဗျာ…
ကွန်မန့်များကို နောက်မှ ကျနော်ရီပလိုင်းလုပ်ပါမည်.. ဒီနေ့ ကျနော်တို့ one candle အဖွဲ့ စာရေးကိရိယာအလှူ ခရီးရှိနေသည့်အတွက် သွားလိုက်ပါဦးမယ်ဗျို့…
သာဓု သာဓု သာဓုပါဗျာ.. comment လေဖတ်ပြီးမျက်ရည်တောင် ဝဲတယ်ဗျာ
မနက် ရွာဝင်ဝင်ချင်း တွေ့လိုက်ရတာ အလွန်မင်္ဂလာရှိတဲ့ ပိုစ့်လေးပါ ကိုထွန်းဝင်းလတ်ရေ..။
ကျုပ်တို့ရွာသားတွေရဲ့ လူ့တာဝန် နိုင်ငံသားတာဝန် ကျေပွန်ခဲ့ကြတာမို့ ရွာသားတွေအတွက်လဲ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
အချိန်ကုန်၊ ငွေကုန်၊ အပင်ပန်းခံပြီး လူသားလိုအပ်ချက်တွေ လိုက်ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တဲ့ ကိုထွန်းဝင်းလတ်နဲ့အဖွဲ့ကိုလဲ ဂုဏ်ပြုပါကြောင်းဗျာ…
ဒါနဲ့ စကားမစပ် ကျွန်တော် တို့လျှူခဲ့တဲ့ အစုကြီး ဆေးရုံက ရာနှုန်းပြည့်ပြီးစီးသွားပြီး ပထမဆုံးဖွင့်မယ်လို့ ဆရာတော်ရဲ့ တရားထဲ တွေ့မိပါကြောင်း သူ့ရဲ့မွေးရပ်ဖြစ်တဲ့ သဲကုန်းက နောက်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း ကြားသိရပါသည် ..
နံနက်စောစော အလှုသတင်း ဖတ်ရတာ မင်္ဂလာရှိလိုက်တာဗျာ …
” အလှူပစ္စည်းတွေအတွက် ခေါင်တုန့်စည်ရွာသားတွေက မျက်ရည်တွေပါ ကျကုန်တယ်ခင်ဗျ..သူတို့လို တောကျလွန်းတဲ့ ရွာလေးကို ဘယ်သူကမှ ဒီလောက်များများ မလှူကြဘူးလို့တဲ့ခင်ဗျ..”
ဟောဒီလို ရွာသားတွေရဲ့ စကားသံကြားမိလို့ ပီတိလဲ ဖြစ်ရပါတယ် …
အလှုမပါဝင်ဖြစ်လိုက်ရတဲ့ ရွာသူားတွေအတွက် အမျှပေးဝေပါတယ်ခင်ဗျာ..
အမျှ.. အမျှ…အမျှ ..
မနက်စောစော မင်္ဂလာရှိတဲ့သတင်းလေးဖတ်ရတာ စိတ်ရွင်လန်းဝမ်းမြောက်မိပါတယ်ဗျာ
ပထမဆုံးကျေးဇူးတင်ထိုက်သူကတော့ ကိုထွန်းဝင်းလတ်ပေါ့ဗျာ… ကျွန်တော်တို့ရွာသူရွာသားတွေကို အခုလိုစေတနာသဒ္ဒါတရားတွေ ဖြစ်ပေါ်လာအောင် ဓာတ်ပုံလေးတွေရွာထဲမှာတင်ပေးတဲ့သူမို့ အရင်ဆုံးကျေးဇူးတင်လိုက်ပါတယ်…
ဒုတိယအနေနဲ့ စေတနာထက်သန်စွာ အလှူငွေဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးကြသော ရွာသူရွာသာများအားလုံးနဲ့ ဒီအလှူလေးဖြစ်မြောက်အောင် ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုကြသောသူများအားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်လျက်….
တစ်ကယ်တန်း လက်တွေ့ကျ ပြောရရင်
ကိုထွန်းဝင်းလတ် လို နိဗ္ဗာန်ဆော်မျိုးက အများကြီးအပင်ပန်းခံ အနစ်နာခံ အချိန်အကုန်ခံပြီး ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးလို့
စေတနာသဒ္ဒါရှင်တွေရဲ့ ဆန္ဒတွေ အကောင်အထည်ပေါ်လာရတာပါ။
ကြောင်ဝတုတ် နဲ့ ကိုပေ ပြောသလိုပါဘဲ ။ ကိုထွန်းဝင်းလတ်တို့ ကျေးဇူး နဲ့ ဆန္ဒ တွေ အကောင်အထည် ပေါ်လာကြရတာပါ ။ အသုံးတည့်သူတွေ ထံ တိုက်ရိုက် ရောက်တဲ့ အတွက် အလွန်ကျေးဇူးတင် ဂုဏ်ယူ ၀မ်းမြောက် ပီတိဖြစ်ပါတယ် ။
အလှုငွေ အဓိက ကောက်ခံပေးခဲ့တဲ့ လေးပေါက် ၊ ကိုအမတ်မင်း၊ ကိုရွှေတိုက်စိုး၊ ဘဘဘလက်၊ ဦးဦးပါလေရာ ၊ ရွာစားကျော် နှင့် ပါဝင်ခဲ့သူများအားလုံး၊ အချိန်မဆိုင်းချက်ခြင်းဈေးနုန်းစုံစမ်းပေး ၊၀ယ်ယူပေးခဲ့တဲ့ လေးပေါက်၊ကိုပေ တို့ နှင့် တကွ ယုံယုံကြည်ကြည် လှုဒါန်းကြသူများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းထပ်လောင်းပြောခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။
ထိုင်ခုံ နဲ့ စားပွဲတွေပါ ထပ်လှုလိုက်ရင် ပြည့်စုံတဲ့ ကျောင်းလေးဖြစ်သွားမှာပါ ။ အလှုခံတာ မဟုတ်ဘူး နော် ။ သဒ္ဒါပေါက်ရဲ့သားနဲ့ မသိလို့ မလှုလိုက်ရဘူး ကထူးဆန်းတို့ ကမပြောဘူး ဖြစ်မှာ စိုးလို့ အသိပေးတာ ..
အရာကြီး နဲ့ ကုလားကြီး အတူတူ ကိုများ … :grin:
ဓါတ်ပုံနှင့်စာအားဖတ်ရှူ့ မြင်တွေ့ ရသည့်အတွက်…
အရမ်းကို ကျက်သရေရှိလိုက်တာ ….
ရွာထဲဝင်ဝင်ချင်း ပို့စ်သတင်းလေးဖတ်လိုက်ရတာ … ကြက်သီးထမိလောက်တဲ့အတိ ၀မ်းသာပီတဖြစ်ရပါတယ် … ။ ရွာသူရွာသားတွေရဲ့ …အချင်းချင်း အပြန်လှန်ယုံကြည်မှုနဲ့ …. စေတနာအားကတော့ တကယ့်ကို အံ့မခန်းပါပဲ … ။ ကိုထွန်းဝင်းလတ်ရေ .. သာဓုလည်းခေါ်ပါတယ် … စိတ်အားထက်သန်မှုကိုလည်း ချီးကျူးမိပါတယ် … ။
အလှူအတွက် အဘက်ဘက်မှ ၀ိုင်းဝန်းပံ့ပိုးသူအားလုံးကိုယ်စား လေးစားသာဓုခေါ်မိပါသည် ……..
ဒီလိုအလှူမျိုးမှာ ပိုမိုဆောင်ရွက်ပေးချင်စိတ် များသထက်ထက်များလာပါတယ်။
ဒီလိုအလှူအတွက်ဆိုရင် မန်းလေးမြို့နဲ့ပါတ်သက်တာမှန်သမျှ ကျနော်က အကူအညီပေးဖို့
လေးပေါက်တို့ကတော့ တကယ်ချီးကျူးလောက်ပါတယ် ….. တော်တော်ကို သွားနိုင်လာနိုင်တယ် … ရန်ကုန်မှာ မိုးရွာပေမယ့် မန်းလေးမှာ မိုးမရွာဘဲ နွေခေါင်ခေါင်လိုပူနေတာတောင် အလုပ်တဖက်နဲ့ နေ့မအား ညမအားလုပ်ပေးနိုင်တယ် …… ရှေးကုသိုလ်ကံက ကောင်းတာလည်း ပါမယ်ထင်ပါတယ် … သမီးဆို အခုခရီးလေး ခဏထွက်တာ ပြန်ရောက်တဲ့နေမှာ အိပ်လို့ကို မ၀ဘူး ………
ဦးဆောင်ပြီး ပြုလုပ်ပေးကြသောသူများနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ကြသောသူများကြောင့် လိုအပ်သူများပြည့်စုံရသလို သိ မြင် ကြား ရသူများလည်းမေတ္တာပွားရပါသည်….Mandalay Gazette ရဲ့ဂုဏ်သတင်းကလည်းမွှေးပျံကျော်ဇော လာပါသည်…..အားလုံးကိုလည်း ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ သာဓုခေါ်ပါတယ်……..
လာရောက်ကြည့်ရှု့ပြီး ကွန်မန့်များပေးကြသော သူငယ်ချင်ေးတွအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
မနေ့ကတော့ တကယ်ကို ၀မ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်…တိုက်ဆိုင်တာ တစ်ခုက ဆရာတော်ရွေးလိုက်တဲ့
အလှူရက်ဟာ ကျနော့်ရဲ့ ၃၂ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ဖြစ်နေတာရယ်… နောက်တစ်ခုက အင်တာနက်အသုံးပြုပြီး
ပရဟိတအလုပ်တွေ လုပ်နိုင်တဲ့အကြောင်းလေးတွေရယ်…..ကျနော်တို့တိုင်းပြည် အနာဂတ်ကောင်းအောင် ကလေးတွေ အရေးကြီးတဲ့ အကြောင်းတွေရယ်… မမြင်ဘူးကြပေမယ့် စေတနာထက်သန်စွာ လှူဒါန်းပေးကြတဲ့ ဂေဇက်ရွာအကြောင်းတွေရယ်ကို ပြောပြခွင့်ရတဲ့ အတွက်…အလွန်ကြည်နူးဝမ်းမြောက်ခဲ့ရတဲ့ အလှူပွဲလေးဖြစ်သလို ဘ၀မှာ အမှတ်တရ မွေးနေ့လေးတစ်ခု
ဖြစ်သွားခဲ့ရတာကို အမြဲ အမှတ်ရနေမှာပါခင်ဗျာ….
အလှူဓာတ်ပုံလေးတွေကို တွေ့ရတော့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွားလှူလိုက်ရသလို ခံစားရတယ်။
ရွာသူရွာသားတွေ ၀မ်းသာကြတယ်လို့ ရေးထားတာကိုတွေ့လိုက်ရတော့ ပိုပြီး ၀မ်းသာသွားရတယ်။ [:)]
ကျွန်မ လဲ ဝမ်းသာဝမ်းနဲ ခံစားရပါတယ်။
ကိုထွန်းဝင်းလတ် နဲ့ အဖွဲ့ ကို လဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဂေဇက် ကိုယ်စားပြု လုပ်ဆောင်ပေးသူ များ ကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ပိုပြီး အောင်မြင် ကြပါစေ။ :-)
ကျွန်တော်ဂျာနယ်မှာ သတင်းရေး ပေးချင်တယ် ဗျာ
ကျွန်တော့်တို့ မန်းဂေဇက်ရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်ကို အများသိစေချင်တယ်
ခင်ဗျား ခွင့်ပြု မယ်လို့ လည်း ထင်ပါတယ် ဓါတ်ပု့ လည်း သုံး မယ်ဗျာ..နော့
နောက်ထပ်နောက်ထပ် အလှူများကိုလည်း မျှော်လင့်နေမိပါတယ် …
ဦးဆောင်နိုင်သူတွေ အားလုံးကို လည်း လေးစားဂုဏ်ယူပါတယ်ဗျာ …
မြင်ရတာ တကယ်ကို စိတ်ချမ်းမြေ့စရာကောင်းပါတယ်